China China China China factory and manufacturers နှင့် ထုတ်လုပ်သူ | အိုမီ
ကျန်းမာရေးနှင့် မုန့်ဖုတ် အစားအစာအိတ်များ
ပြတင်းပေါက်နှင့် ဇစ်ပါသော မတ်တပ်ရပ်-အိတ်
ဇစ်ပါသော ဘေးဘက်တံဆိပ်အိတ် ရှစ်လုံး
ဇစ်မပါသော ဘေးဘက်တံဆိပ်အိတ် ရှစ်လုံး
Quad-side-seal gusset အိတ်
ကော်ဖီ & လက်ဖက်ရည်အိတ်
အခြောက်လှန်းအသီး & ခွံမာသီးအိတ်
ကျန်းမာရေး & မုန့်ဖုတ်အစားအစာအိတ်
မြင့်မားသောအတားအဆီး VMPBAT ဇီဝဖျက်စီးနိုင်သောထုပ်ပိုးမှု
အနောက်အလုံပိတ် eco အိတ်ဆွေးမြေဆွေးများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသူ
Compo ဖြင့် စတုရန်းအောက်ခြေ ထုပ်ပိုးမှုကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသူ
အပြည့်အ၀ ဇီဝဖျက်စီးနိုင်သော PLA စက်ရုံမှ ရပ်တည်နေသော တရုတ်စက်ရုံ
လက်ဖက်ခြောက်အတွက် တစ်ဖက်ပိတ် ထုပ်ပိုးမှု တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသူ
Heat Seal Tea Bag Filter Paper ကို လိပ်ထားပါ။
OEMY စိတ်ကြိုက် 8 ခြမ်းအလုံပိတ်စတုရန်းအောက်ခြေမြေဆွေး ...
အစိမ်းရောင်စစ်စစ် နဂါးစက္ကူကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး အိတ်နဲ့ tra...
အညိုရောင်စက္ကူစတုရန်းအောက်ခြေထုပ်ပိုးအိတ် AL foi...
အစားအသောက် အခြောက်လှန်းသော အိတ်ဆောင် ထုပ်ပိုး၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊
OEM စတုရန်းအောက်ခြေအညိုရောင် kraft စက္ကူကော်ဖီမှုန့် pa ...
ဇီဝပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းအသစ် စတုရန်းအောက်ခြေထုပ်ပိုးမှု ...
ဆန်အတွက် ဇီဝပြိုကွဲနိုင်သော ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း။
အပြည့်အဝ biodegradable nut ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ သစ်သီးခြောက်များကို ထုပ်ပိုးထားသော စက်ရုံမှ အလုံပိတ်အိတ်များ ၊
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်စုံပုံနှိပ်စက္ကူ ထုတ်လုပ်သူ...
အပြည့်အဝ biodegradable PLA ၏တရုတ်စက်ရုံသည်ပြတင်းပေါက်နှင့်ဇစ်ပါသောထုပ်ပိုးထားသော kraft စက္ကူအိတ်များကိုရပ်စေသည်။
အပြည့်အ၀ ဇီဝချေဖျက်နိုင်သော PLA သည် ပြတင်းပေါက်နှင့် ဇစ်ပါသော ထုပ်ပိုးထားသော Kraft စက္ကူအိတ်များ ၊ လက်ဖက်ရွက်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကော်ဖီစေ့ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးအိတ်များ။
၎င်းသည် သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် ရိုးရှင်းသောထုပ်ပိုးအိတ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်တံဆိပ်၊ မိုဘိုင်းကြော်ငြာ၊ တန်ဖိုးဆက်သွယ်ရေး၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှုပါပဲ။
1. ဆွေးမြေ့နိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည့် PLA+PBAT+Kraft စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ထုပ်ပိုးအိတ်များ။
2.ထုပ်ပိုးအိတ်သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့ကို တစ်နှစ်အတွင်း မြေဆီလွှာအဖြစ် ပျက်ဆီးစေပြီး အပင်များက စုပ်ယူနိုင်သည်။ တကယ်က သဘာဝကနေ ဆင်းသက်လာပြီး သဘာဝကို ပြန်သွားတာပါ။
၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရ။ ကမ္ဘာကြီးက ပိုကောင်းလာမယ်။
Size ကို & ထူ: custom သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး
မှင်အမျိုးအစား: Eco-friendly စားနပ်ရိက္ခာအဆင့် soy မှင်
ပစ္စည်း: PLA+PBAT+ Kraft စက္ကူ
feature: 1) .Safety စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ပစ္စည်း & ပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်
2) .Great ယိုစိမ့်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စို-သက်သေပြချက်မှကာကွယ်ရန်
3) .Strong ပိတျထားသောအောက် & ကောင်းမွန်သော Display ကို Effect
လက်မှတ်များ: လိုအပ်ခဲ့လျှင် FSSC22000, SGS စသည်တို့ .. FDA ကလက်မှတ်လည်းလုပ်နိုင်ပါသည်
စတိုင် Options ကို: ပြားချပ်ချပ်အောက်, ထရပ်ဘက် gusset, ဇစ်ထိပ်တန်း, အတူသို့မဟုတ်စသည်တို့ကို Windows, ယူရို Hole, မပါဘဲ
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် လက်ကိုင် အပူတံဆိပ်
မျက်နှာပြင် ကိုင်တွယ်ခြင်း။ ဖောင်းကြွနေသည်။
ပုံနှိပ်: Copperplate ပုံနှိပ်ခြင်း, အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်
အရောင်: 10 အရောင်များသို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမပုံနှိပ်ခြင်းမှတက်
အနုပညာလက်ရာပုံစံ: AI အ, PDF ဖိုင်ရယူရန်, CDR, PSD, etc,
စျေးနှုန်း: ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အတိုင်းအတာ၊ အရေအတွက်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း အရောင်များနှင့် အခြားဝယ်ယူသူ၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ (စျေးနှုန်းကို ကိုးကားရန်အတွက်သာ တင်ထားပါသည်)
ငွေပေးချေမှုရမည့်: T/T၊ Paypal၊ Western Union၊ Trade Assurance လက်ခံသည်။
30% အိတ်ကုန်ကျစရိတ် + 100% ပုံနှိပ်စက်ဆလင်ဒါများကို စပေါ်ငွေအဖြစ် ကောက်ခံပြီး၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ 70% လက်ကျန်
နမူနာ: 1) ။ ရုံကုန်တင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အခမဲ့ & Nice စတော့ရှယ်ယာနမူနာစုဆောင်း
2) ။ custom နမူနာ 7-15 အလုပ်လုပ်ရက် (Express က Send)
3) ။ လက်ခံရရှိသိုက်ပြီးနောက်ပြန်အမ်းငွေအပိုင်း / အပြည့်အဝနမူနာအခကြေးငွေ
ကြာမြင့်ချိန်: ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 15-20 အလုပ်လုပ်ရက်။
တင်ဆိပ်ကမ်း: Huangpu / ရှန်ကျန်း / သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်
ထုပ်ပိုး: စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုအလိုက် ပုံမှန်ထုပ်ပိုးပုံး/သေတ္တာ(≤25Kg)ကို တင်ပို့ပါ။
Biodegradable Packaging Bags ၏ထူးခြားချက်ရုပ်ပုံများ
biodegradable packaging အိတ်များ၏ထူးခြားချက်
1. PLA ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဇစ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အဖွင့်အပိတ် လုပ်နိုင်သော၊
အိတ်၏တင်းကျပ်မှုကိုအာမခံသည်။ မြေဆီလွှာတွင် ပျက်ဆီးနိုင်သည်။
4.High quality Kraft paper, biodegradable PLA+PBAT film, itသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် s environmentally friendly and great value
5. Strong stand- up အောက်ခြေ ၊ ကြီးမားသောသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည် ။
6. Strong tensile ။ ထုပ်ပိုးအိတ်သည် ကောင်းသောမျက်ရည်ယိုခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြာရှည်ခံသည်။
7.Milky အဖြူ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပြတင်းပေါက်၊ ဤအရာသည် အပြည့်အဝ ပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း အရေးကြီးသော သက်သေဖြစ်ပါသည်။
8. ပြတင်းပေါက်၏ပုံသဏ္ဍာန်သည်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း၊ ကော်မရှိ၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သည်။
1. ဈေးကွက်တွင် လေအဆို့ရှင်များ၏ 99.9% ကို PE ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကာ လုံးဝပြိုကွဲရန် နှစ် 1000 ကြာသည်။ ဒါဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေပါတယ်။ သို့သော်လည်း PLA လေဝင်ပေါက်ကို အပင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး 2-3 နှစ်အတွင်း မြေဆီလွှာတွင် ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ရေနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို အပင်များက စုပ်ယူကြသည်။
2. PLA မှ လေအဆို့ရှင်ပြုလုပ်ရန် နည်းပညာအရ ခက်ခဲသည်။ ဤနည်းပညာသည် ထုတ်လုပ်သူအနည်းစု၏လက်ထဲတွင်ရှိပြီး OEMY ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘေးထွက်ထုပ်ပိုးအိတ်များ၏ အကြံပြုထားသော အရွယ်အစား
(W * H * အောက်စင်တီမီတာ)
x က6း9က x 6
x က610 x ကို 15
x က 8 12 x 20
x က 8 14 x 20
x က 8 14 x ကို 22
x က 8 16 x ကို 22
x က 8 16 x ကို 26
x က 8 18 x ကို 26
18 x ကို 30 ရက်က x 10
20 x ကို 30 ရက်က x 10
22 x ကို 31 x 10
23 x ကို 35 x 10
အသက် 30 x ကို 40 x ကို 12
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအဖြစ် Customize လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
1.Biodegradable packaging အိတ်များသည် အလွန် စွယ်စုံရရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်နိုင်သော အိတ်များဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည်- coffee bean,coffee powder ,Tea leaves, Rice, dried fruit, snack food, dried meat, whole grains, tea ,etc.
2. သင်၏ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးအိတ်များကို ဇီဝဖျက်စီးနိုင်သောထုပ်ပိုးအိတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုနည်းစေပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုစိမ်းလန်းစေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်များ။
1.OEMY ကုမ္ပဏီသည် မတူညီသော ထုတ်ကုန်များအတွက် ဇီဝပျက်စီးနိုင်သော ထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းချက်များအား ကမ်းလှမ်းရာတွင် အထူးပြုပါသည်။
2.Client သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တောင်းဆိုမှုများနှင့် အရင်းအမြစ်များစွာကို R&D တွင် ထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသေးစိတ်နှင့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း အကောင်းဆုံးစက်နှင့် အဆင့်မြင့်ဆုံးနည်းပညာများရှိသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို အချိန်မီ ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။
4.ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုသည် ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ သင်၏အောင်မြင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်။ သင့်အောင်မြင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုပ်ပိုးပြီး၊ သင်၏ အကောင်းဆုံး ပက်ကေ့ဂျ်များကို ဤနေရာမှ စတင်ပါသည်။
သင့်မှာယူမှုမှ စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းချက်ကို ယခုရယူလိုက်ပါ။
Q1: .Are သင်တစ်ဦးထုတ်လုပ်သူ?
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် R&D၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော 15 နှစ်ကြာ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Dongguan City of Guangdong Province.China
Q2: ဘယ်အချက်အလက်ငါတိကျသော quotation အရချင်တယ်ဆိုရင်သင့်အကြောင်းသိစေသင့်သနည်း
A: အိတ်အမျိုးအစား၊ ပစ္စည်း၊ အရွယ်အစား၊ အထူ၊ ထုတ်ကုန်အလေးချိန် လိုအပ်
Q3: မဆိုနမူနာတာဝန်ခံကအမ်း & ဘယ်အရာကိုရှိနေသည်လား?
A: စတော့နမူနာများကို အခမဲ့၊ သို့သော် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူနမူနာဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုအပ်ပါက, သင်သည်နမူနာကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် အော်ဒါမှာပြီး အရေအတွက်သည် သတ်မှတ်ထားသော နံပါတ်သို့ရောက်ရှိပါက၊ နမူနာကုန်ကျစရိတ်ကို သင့်ထံ ပြန်ပေးနိုင်ပါသည်။
A: အရည်အသွေးနှင့် 100% ဇီဝချေဖျက်နိုင်သောအိတ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုပ်ပိုးအိတ်များပြုလုပ်ရန် 100% biodegradable material ကိုအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ခြင်းအစကတည်းက အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတွင် အလွန်အရေးပါလာပါသည်။ ထုပ်ပိုးအိတ်များဖြစ်သည့် PLA , PBAT စသည်တို့ဖြစ်သည်။
မေး 5: အိတ် 100% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး၏လေကြောင်းအဆို့ရှင်နှင့်အဇစ်ဖြစ်ပါသလား
A: ဟုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ 100% biodegradable air valve နဲ့ zipper ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နည်းပညာရှင်တွေက တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး 6: သင်ကတခြားဖောက်သည်ငါ၏အကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအိတ်ရောင်းတော်မူမည်လော
A: လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ မှန်ကန်မှုနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးကို လေးစားပြီး အခြားသူများအား ထုတ်ဖော်မည်မဟုတ်ပါ။
မေး 7: သင်၏ပေးပို့ကာလကဘာလဲ?
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့မှုကာလသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 15-25 ရက်အတွင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် အမှန်တကယ်ပေးပို့သည့်ကာလသည် လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
ယခင်: လက်ဖက်ရွက်များအတွက် gusset biodegradable ထုပ်ပိုးမှုနောက်ကျောတံဆိပ်ခတ်အိတ်များ၏တရုတ်စက်ရုံ
နောက်တစ်ခု: ဇီဝပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သော PLA ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ စက္ကူအိတ်များကို တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ထုပ်ပိုးရောင်းချသူ
ဇီဝရုပ်ဖျက်နိုင်သော PLA အိတ်
ဇီဝဖျက်စီးနိုင်သော PLA အိတ်များ
ဇီဝဖျက်စီးနိုင်သော PLA အိတ်
ဇီဝရုပ်ဖျက်နိုင်သော PLA အိတ်များ
မြေဆွေး PLA အိတ်
မြေဆွေး PLA အိတ်များ
ဆွေးမြေ့နိုင်သော PLA ထုပ်ပိုးမှု
ဆွေးမြေ့နိုင်သော PLA ထုပ်ပိုးအိတ်
ဆွေးမြေ့နိုင်သော PLA ထုပ်ပိုးအိတ်များ
ဆွေးမြေ့နိုင်သော PLA အိတ်
ဆွေးမြေ့နိုင်သော PLA အိတ်များ
အိမ်သုံး မြေဆွေး PLA အိတ်
အိမ်သုံး မြေဆွေး PLA အိတ်များ
အိမ်သုံးမြေဆွေး PLA ထုပ်ပိုးမှု
အိမ်သုံးမြေဆွေး PLA ထုပ်ပိုးအိတ်
အိမ်သုံးမြေဆွေး PLA ထုပ်ပိုးအိတ်များ
အိမ်သုံး မြေဆွေး PLA ထုပ်ပိုးအိတ်
အိမ်သုံး ဆွေးမြေ့နိုင်သော PLA ထုပ်ပိုးအိတ်များ
အိမ်သုံးမြေဆွေး PLA အိတ်
အိမ်သုံးမြေဆွေး PLA အိတ်များ
နောက်ကျောကိုတံဆိပ်ခတ် gusset ယာဉ်စက္ကူထုပ်ပိုးအိတ်f...
အညိုရောင်စက္ကူစတုရန်းအောက်ခြေထုပ်ပိုးအိတ် A ...
Fully Degradable Compostable S အမျိုးအစား ၃ မျိုး...
Food Pac တွင် Kraft Paper ၏ အားသာချက်များ...
Biodegradable Materials ၏အင်္ဂါရပ်များ
OEMY သည် VMPBAT ကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်ခဲ့သည်။
R1014၊ F10၊ A6၊ Yongning လမ်း၊ Zengcheng၊ Guangzhou City၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ တရုတ်။
အခြောက်လှန်းအသီးထုပ်ပိုးအိတ် , ကနျြးမာရေးစားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးအိတ်, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးအိတ် , အခြောက်လှန်းအသီးအိတ် , non-အဓိကအစားအစာထုပ်ပိုးအိတ်, အခြောက်လှန်းအသီးအိတ် ၊